Izindaba - I-anti-virus light down jacket ivikela umndeni wakho
Ijekithi elwa namagciwane elwa namagciwane elincane: leli gciwane liyisidalwa esincane, esilula esiqukethe uhlobo olulodwa kuphela lwe-nucleic acid (i-DNA noma i-RNA) okumele lihlale kumaseli axhumayo futhi lande ngokuziphindaphinda. Yize amagciwane elula ngesakhiwo futhi amancane ngosayizi, wona kungenza abantu nezitshalo bagule futhi bababulale. Phakathi kwamagciwane amancane e-DNA, ngokwesibonelo, amanye abanga i-gastroenteritis ebantwini nasezingulubeni futhi, kanti amanye adla amawashi wabantu abancane futhi awanalo ikhono lokuzenzela izifo ngokwabo, kepha ngosizo lwe-adenovirus, elinye igciwane elisizayo elingena ngaphakathi emathanjeni.
Igciwane elithinta kakhulu abantu umkhuhlane! Umkhuhlane ubulala abantu abangaphezu kwama-88,000 ngonyaka eChina, Amaphesenti angaphezu kwama-80 ngabantu asebekhulile abaneminyaka engaphezu kwengama-60 ubudala.Amagciwane omkhuhlane adluliselwa ikakhulukazi ngamaconsi asemoyeni, ukuxhumana phakathi kwabantu abathintekayo nabantu abanegciwane, noma ukuxhumana nezinto ezingcolile. Isikhathi sasebusika sokuwa jikelele yisikhathi sezigameko eziphezulu, ikakhulu esibangelwa igciwane lomkhuhlane igciwane kanye ne-influenza B .Umqambi angathanda ukukutshela ukuthi inhloso yokuqala yalo mkhiqizo ukuvikela impilo yakhe nomndeni wakhe.
Indwangu elwa namagciwane ivuthiwe kakhulu emakethe, futhi ukuhlolwa nokuhlolwa kwama-anti-virus kushelelezi ngokuthe ngqó.Umqedazwe wasekhaya wafakwa kancane kancane, kodwa ekucabangeni kwesibili, lo mkhiqizo unomphumela othile ku-virus ejwayelekile yomkhuhlane, ngakho-ke kuthunyelwe kuwo wonke umuntu, umkhiqizo uchungechunge lomzali nengane, imfashini elula.Ngithemba ukuthi umhlaba wonke ungaphila ngokuthula futhi ungakhululeki ezifweni nasenhlekeleleni
Le jakhethi engasindi ilungele iminyaka ehlukahlukene, futhi ingagqokwa yizingane nabantu abadala. Ingagqokwa njengengubo yomzali nengane noma njengombhangqwana ukwenza umndeni wakho ufudumele futhi usondelene kakhulu.Ngakhathaliseki ukuthi kungokokuhamba, umndeni, noma ukuya njalo, ibhantshi eliphansi linikeza ukulula okungenamkhawulo.